आलुमा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक धेरै पौष्टिक तत्वहरू हुन्छन् । हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार, आलुमा केहीयस्ता भिटामीन पाइन्छ, जुन शरीरको सम्पूर्ण विकासमा अत्यावश्यक हुन्छ । भिटामीन बी, भिटामिन सी, क्याल्सियम, जिंक, फस्फोरस र म्याग्नेसियम लगायत तत्व आलुमा भरपुर पाइन्छ । कार्बोहाईड्रेटको सबैभन्दा उत्तम स्रोतको रुपमा आलुलाई लिइन्छ । आलुमा पर्याप्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेट पाईन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर,आलुमा कार्बोहाइड्रेट मात्रै पाइदैन यसमा मानव शरीरका लागि आवश्यक अन्य तत्वहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ । धेरै मानिसमा आलु खाए मोटाइन्छ भन्ने एक प्रकारको भ्रम छ । वास्तविकता भने अलि फरक छ । आलुमात्रै होइन जुनसुकै कुरा पनि धेरै खाए स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
समथर मैदानी भूभागदेखि चिसो पहाडसम्म एकछत्र उत्पादन हुन्छ आलु। अफ्रिकादेखि एसिया अनि युरोपदेखि अमेरिकासम्म आलु उत्पादन नहुने कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन। आलुको उत्पत्ति दुई हजार वर्षभन्दा पहिला सर्वप्रथम दक्षिण अमेरिकाको पेरुमा भएको कुरो वैज्ञानिक बताउँछन्। त्यसपछि सत्रौं शताब्दीमा स्पेनका नाविकले पेरु जितेपछि आलुलाई स्पेनमा ल्याएको देखिन्छ भने सन् १५८०मा कोलम्बसले स्पेनबाट युरोप लगिएको पाइन्छ।
युरोपको जर्मनी, अष्ट्रिया, फ्रान्स, पोर्चुगल आदि देशमा फैलिन करिब दुई सय वर्ष लागेको आलुलाई पोर्चुगलीले भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गराएको जानकारी इतिहासमा पाइन्छ। तर हिन्दूको प्राचीन ग्रन्थ वेदमा एवं आयुर्वेदिक ग्रन्थ चरकसंहितामा पनि आलुकै र आलु एउटै देखिएकोले हाम्रो यहाँ आलुको उपस्थिति त्यो भन्दा निकै पहिले नै भइसकेको देखिन्छ।
३. बलियो मांंसपेशिहरुका लागि आलुको सेवन गर्ने गरिन्छ । व्यायाम पछि कार्बोहाइड्रेटले शरीरलाई सबै भन्दा पहिले ऊर्जा दिने काम गर्छ र आलू
कार्बोहाइड्रेटको उत्तम स्रोत हो । आलुको सेवनले मांसपेशिहरु बलियो हुन्छ ।
५. स्वस्थ छालाका लागि पनि आलु एक राम्रो उपाय हो । आलुमा पाईने भिटामिन सी ले डार्क सर्कललाई हटाउनमा मद्दत गर्छ र कार्बोहाइड्रेटले
मांसपेशिहरुलाई कसिलो बनाउनमा मद्दत गर्छ ।
१.कपाल फुल्नबाट जोगाउछ :
२.छाला चम्किलो बनाउँछः
३.पोषण तत्वको स्रोतः
Topics #आलु #आलुको बोक्रा #स्वास्थ्य